Mamoaza voa mendrika ny fibebahana
1 Korintiana 15:58 : «…miorena tsara aza miova… »
Ahoana no ahazoana mitazona tsara ny fiainam-panahy manoloana izao fotoana manahirana izao ? Mandroso tsy miova na mihasarotra aza ny lalana satria ny tenin’Andriamanitra tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay.
Jaona 14:19 : “…satria velona Aho dia ho velona koa hianareo. ”
Ny fisian'i Jesosy ao anatin’ny fiainantsika no vatofantsika ahazoana miatrika ny fotoan- tsarotra rehetra.
Indreto dingana roa :
Ataovy azo antoka aloha fa nandray ny famonjena hianao :
Ataovy azo antoka fa tafiditra ao anatin’ny fanjakan’Andriamanitra ianao. Misy fanjakana roa eto amin’izao tontolo izao : fanjakan’ilay ratsy sy fanjakan’Andriamanitra. Isika tsy maintsy miditra ao anatin’io fanjakan’Andriamanitra io mba ahafahantsika miatrika ny zava-tsarotra rehetra.
Io tsy fiangonana, tsy fombafombam-pivavahana, tsy fikambanana fa Kristy ao anaty.
Rehefa tafiditra ao dia manana ny « stabilité » rehetra. Aty ivelany mety mikorontana, fa ny Tompo dia manome antsika foana mba hiorenantsika tsara => Jesosy no mitondra ny fanjakana ao anatintsika, mitondra ny fiainantsika. Rehefa miditra ao hianao dia manana vahaolana ny Tompo.
Raha ao anatinareo Kristy dia marina foana ny teniny manao hoe : “ Fiadanana no avelako ho anareo, ny fiadanako no omeko anareo; tsy tahaka ny fanomen’ izao tontolo izao no fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo.” Jaona 14:27
Tsy midika izany akory fa tsisy olana, saingy milamina ao anatin'ny fanjakan’Andriamanitra hianao amin’ny alalan’ny fanekenao hidiran’I jesosy hitondra ny sambokelin’ny fiainanao.
Mitenena : “Jesosy ô, midira ato am-poko hitondra ny fiainako”.
Mitady anao ny Tompo amin’ny alalan’izao toriteny izao. Maneke Azy hitondra ny fiainanao.
Ny tenin’Andriamanitra no hitondra ny fiainanao.
Ahoana no hitahirizana ny famonjena ? manantena vokatra Andriamanitra.
Raha voarainao marina I Jesosy misy zavatra tsy maintsy mivoaka.
Ohatra ilay vehivavy samaritana ao amin’ny Jaona 4 , jentilisa mpijangajanga, menatra olona, nihaona tamin’i Jesosy minitra vitsy. Rehefa niresaka taminy izy dia resilahatra ka nankany an-tanana.
Voa voalohany: resilahatra ny manodidina hoe vehivavy tahaka izao ve dia nitondra izany fiainana izany => voa mendrika ny fibebahana. Raha tena nandray an’I Jesosy ianao tsy maintsy hitan’ny manodidina ny fiovam-piainanao : manomboka ao an-tokatrano (manao ahoana ny fomba firesakao sy fihetsikao amin’ny vady aman-janakao ?)
Mila voa hita ny maso ny Tompo. Aza maika hanao batisa, handray fanasan’ny Tompo, hanao diakona, hanao asan’Andriamanitra fa mamoaza voa mendrika ny fibebahana aloha.
Ataovy hita fa niova hianao : ny fitondran-tena, ny fiteny, ny fiovam-po…Io anefa tsy fihetsiketsika na fombafomba ety ivelany, fa fiainana andavan’andro. Izany no fitahirizana ny famonjena.
Ilay vehivavy samaritana rehefa resy lahatra dia lasa nandeha ka dia niresaka tamin’ny olona izy hoe tena nahita an’I Jesosy aho, izao no mesia, izao no Andriamanitra.
Hoy ny olona tsy ny filazanao fotsiny fa izahay mahita fa marina izany =>
Voa faharoa: mandresy lahatra ny manodidina amin’izay.
Vakio : Matio 21, Marka 11, nanao fanoharana ny Tompo mikasika ny voaloboka.
Ny zavatra tadiavin’Andriamanitra amintsika dia ny hitondra voa. Ataovy hitan’ny manodidina izany.
Ahoana no ahazoana mamokatra :
Jaona 15:2 : “ Ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esoriny; fa ny sampany rehetra izay mamoa kosa dia amboariny , mba hamoa bebe kokoa. ” => manàna firaisana amin’Andriamanitra fa karakainy (omeny fahasalamana, omeny vola, ny rehetra). Aza ny olam-piananao no maha maika anao fa tsy ho vohavahanao io.
Rehefa manana firaisana Aminy ianao dia asehoy amin’izay fa tonga olom-baovao hahatonga ny olona manao hoe andeha mba hanaraka anareo izahay.
Noho izany, tsy maintsy maty ilay toetra taloha 2 Timoty 2:11 : “ Mahatoky izao teny izao: Fa raha miara-maty aminy isika, dia hiara-belona aminy koa” => mila manana firaisana amin’I Tompo amin’ny alalan’ny fitondran-tena sy amin’ny vavaka.
Galatiana 2:20 : “ Voahombo miaraka amin’ i Kristy amin’ ny hazo fijaliana aho, arytsy izaho intsony no velona, fa Kristy no velona ato anatiko”.
Misy fanasaziana ho an’izay tsy mamokatra ao amin’ny Matio 25.
Androany, mandraisa fanampahan-kevitra. Manaova fanekena fa vonona ny hamokatra.
Meteza ho ampiasain’ny Tompo ny asa aman-draharahanao. Ataovy misy olona voavonjy mandram-pialantsika eo amin’ny toeram-piasana, eto an-tany.
Aza matahotra fa izay mamokatra dia karakarain’ny Tompo. Meteza fotsiny hiasa ho Azy.
Jaona 15:16: “ Tsy hianareo no nifidy Ahy, fa Izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa, ary mba haharetan’ ny vokatrareo, mba homen’ ny Ray anareo izay rehetra hangatahinareo amin’ ny anarako na inona na inona.”
Koa inona no mbola mampisalasala antsika ?
Androany ny Tompo hanao zava-mahagaga eo amin’ny fiainanao, hanova ny tantaram-piainanao.